Jiri njikọ na ọrụ gị, ya na ụzọ mkpirisi keyboard maka Mac | Esi m mac
N'oge a, ọ bara uru ma anyị na-arụ ọrụ na akwụkwọ maka ojiji anyị ma ọ bụ maka ndị ọzọ, ojiji nke njiko. Maka ndị na-amatabeghị ihe njikọ bụ, ọ gụnyere akara mkpụrụokwu ma ọ bụ okwu ka ọ pụta ìhè na ederede ahụ, na ịpị ya ga-eme ihe. Nọmalị ihe a na-eziga anyị na ibe weebụ ma e nwere nnukwu okike nke ihe a: Anyị ga-ejikọ weebụsaịtị ọzọ iji gbakwunye ozi anyị, ibe YouTube ma ọ bụ ọrụ yiri ya ma ọ bụ ọba foto ma ọ bụ vidiyo.
Enwere ụzọ mkpirisi igodo iji rụọ ọrụ na Mac, ka anyị nwee ike ịkpọku ọrụ ahụ iji rụọ ọrụ Peeji, nọmba ma ọ bụ Keynote, kamakwa mgbe ị na-arụ ọrụ na ngwa ndị ọzọ ma site na Apple ma site na ndị ọzọ. Na n'ezie na ibe weebụ: Ozi ịntanetị, WordPress, intranet ụlọ ọrụ, n'etiti ndị ọzọ.
A na-arụ ọrụ a na ụzọ mkpirisi keyboard dị ka ndị a:
Anyị na-emeghe ngwa ma ọ bụ ibe chọrọ. N'ihe atụ anyị, anyị ji nkuzi na-akụzi ya, mana n'eziokwu ọ nwere ike ịme ya na ndị ọzọ.
Anyị na-ede ederede ahụ chọrọ ka anyị na-ejikarị.
Anyị na-ahọrọ nke okwu ma ọ bụ set nke mkpụrụ okwu anyị chọrọ iji jikọta. Ọ bụrụ na anyị ejiri ọtụtụ okwu maka njikọ anyị iji nwee njirisi, a ga-ahụrịrị ha otu otu.
Anyị akara okwu jiri trackpad ma ọ bụ òké okwu / s n'otu ụzọ ahụ anyị na-eme mgbe anyị chọrọ igosi okwu.
Ugbu a, anyị na-eji nke anyị mkpirisi mkpirisi keyboard nke ga-abu: Cmd + k.
Nzọụkwụ ọzọ dị iche na mmemme anyị na-eji, mana menu ga-apụta n'akụkụ okwu ahụ na igbe oghere iji tinye njikọ anyị. N'ihe atụ anyị, ọ bụrụ na anyị chọrọ ijikọ na peeji nke M na Mac, anyị ga-etinye:
Iji gosi: okwu a gosipụtara na njikọ ya.
Njikọ na: na nke anyị, weebụsaịtị, mana anyị nwekwara ike igosi na ha na-ezitere anyị email na adreesị anyị na-egosi.
Njikọ: Anyị na-e copyomi ibe anyị chọrọ ijikọ.
N'ikpeazụ, anyị na-akwado ihe ahụ site na ịga na ibe, na ngwa ndị ọzọ na-anakwere.
Anyị kwesịrị ịma ihe anyị kwesịrị ime ma ọ bụrụ na anyị chọrọ gbanwee ma ọ bụ hichapụ njikọ ahụ. Can nwere ike ịmegharị usoro ahụ site na isi 4, mana tupu ikwenye (gaa na ibe) gbanwee oke ịchọrọ ma ọ bụ wepu njikọ ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ kwụsị kpamkpam.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Jiri njikọ na ọrụ gị, ya na ụzọ mkpirisi keyboard maka Mac
Barcode Ọkachamara + na-enye anyị ohere ịmepụta barcode omenala